[RASMI] dr.fone - macruufka System Recovery: Hagaaji macruufka in Normal
dr.fone xidhmo - System macruufka Recovery
Dayactir aad arrimaha macruufka nidaamka guriga
hagaajin Kaliya macruufka ah si aad u caadi ah, ma xogta khasaare ah oo dhan.
Shaqeeyaan dhamaan noocyada of iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
dr.fone xidhmo - System macruufka Recovery kuu ogolaanaysaa inaad hagaajin macruufka dhabarka si caadi ah naftaada by guriga.
Marka aad iPhone ama iPad xayiran in hab-kabashada, ama cad Apple logo, waxyaabaha sida in, habka guud ee soo kabashada aad iPhone / iPad waa iTunes ah loo soo celiyo. Great haddii aad oofiyo gurmad ah oo naxdin leh haddii aadan samayn. Tani waa sababta xidhmo dr.fone - System macruufka Recovery soo baxa. Waxaa si fudud u hagaajin karaa cayn kasta oo arrimaha nidaamka macruufka iyo aad u hesho qalab aad dib u caadi ah. Badanaa muhiimsan, aad qaban karto naftaada by in ka yar 10 daqiiqo gudahood, oo ma waayi doono wixii xog ah.
Maxaad System macruufka Recovery?
dr.fone xidhmo - System macruufka Recovery aad awood u si uu u xaliyo arimaha macruufka waayo xaalado badan oo caan ah.
iPhone / iPad xayiran kabashada loop hab ama iTunes logo.
iPhone / iPad ma heli karo baxay hab DFU.
iPhone / iPad jirsado caddaaday Apple screen logo / screen cad dhimashada.
iPhone / iPad noqdo screen madow, screen casaan ama buluug ah.
iPhone / iPad weligiis Banaadir.
iPhone / iPad u muuqda barafaysan oo aanu ka jawaabin at dhan.
iPhone / iPad dib uma simbiriirixan doonto in lagu furo ama slide in ay korontada go'day.
iPhone / iPad sii dabamariyey on logo Apple ah.
Xaaladaha More kuwan oo kale ah.
Hagaajin macruufka in Normal at Home
Waxaad hagaajin kartaa arrimaha macruufka aad naftaada by, halkii ay ka diraya u hagaajinno dukaamada la farabadan of lacag iyo halista ah ee kuu gaarka ah.
Kabsado System macruufka ka Xaaladaha kala duwan
Hagaajin macruufka ah si aad u caadi ah ka screen madow, hab dib u soo kabashada, screen cad ee dhimashada iyo in ka badan.
Hagaajin macruufka in Normal aan Loss Data
Si ka duwan iTunes ama iCoud soo celin, taas macruufka ah software nidaamka dib u soo kabashada ma beddeli doono xog kasta oo ku saabsan qalab aad. Marka uu helo si caadi ah dib. Wax walba ayaa weli.
No arrinta tahay inaad la isticmaalayo iPhone ugu dambeeyay 7, iPad Pro, ama iPhone hore 4, iPad 1, soo kabashada this xogta iPhone si buuxda u socon kara oo dhan lagu daydo ee iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
Waa inaanad wax xadin doonaa, isbeddel ama daadato xogta aad on qalabka, labada JAILBREAK qalab aad. All waxaa sameeyaa waa u soo laabtay si caadi ah aad u hesho qalab aad jebisay.
Ha ka welwelina Halista ah ee Loss Data
Isbarbar in iTunes soo celiyo ama habab kale oo hagaajin kartaa arrinta nidaamka macruufka ah, iyadoo la isticmaalayo xidhmo dr.fone - System macruufka Recovery ma aad gelin doonaa khatar ugu badiyay xogta iyo goobaha on your iPhone, iPad ama iPod taabashada. All aad u baahan tahay inaad samayso waa is qalab aad ku xiran oo hore u la qasabno yar guurto. Markaas wax kasta oo aad samayn doonaa daqiiqado yar gudahood. Wax on qalab aad uu lumo ama la beddelay. Kani waa sixir in dr.fone xidhmo - System macruufka Recovery falaa.
Hagaaji aad arrimaha macruufka ah si aad u hesho dib u caadi ah.
Qofna ma heli karaan xogta aad iyo xisaab, laakiin aad.
Dhammaan dadka la computer ah u isticmaali karaan.
No waxyeelladayda in xogta aad qalabka oo dhan.
System macruufka Recovery u shaqeeya oo dhan macruufka ah Devices
Thanks aad u badan oo ah qamaar my phone in ay ahayd dhimasho.
SAARKA BEST WELIGOOD
dr.fone iga caawisaa inuu ka soo kabsado sawiro aan la tirtiray. Barnaamijkan waxa u fiican. Waxaan talo qof walba si ay u isticmaalaan barnaamijka haddii aad tirtirto macluumaadka loo baahan yahay.
Waa wax cajiib ah taas oo ka caawisa qaar badan marka aad stupidly tirtirto wax aad u baahan tahay
Joshua Brenne, macruufka
Sida loo Hagaaji Screen White of Death
Solutions Full si uu u xaliyo Error 9 Markaad Hagaaji Your iPhone
Kulan iPhone Error 14? Hel waxa si fudud loo go'an Now!
Sida loo Hagaaji iPhone xayiran on "Connect si iTunes"
Sida loo Hagaaji baadi 53
Dhibaatooyinka Major la iPhone 6 iyo sida loo Hagaaji
Sida loo Hagaaji iPhone Error 4013/4014 Inta lagu jiro macruufka Update
Solutions Full in ay dayactir iPhone Error 3194
Sideen U dayactir iPhone Error 29